China Cuttable Heat Transfer Flock mpanamboatra sy mpamatsy |Alizarin
Ondry famindra hafanana azo tapaka
Anaran'ny vokatra: Flock Heat Transfer
Kaody vokatra: CCF-Flock
fepetra takiana hafa.
ny tetika fanapahana mahazatra rehetra, toy ny
Graphtec FC8600, CE6000, CE6000-F-Mark, CE LITE-50, Silhouette CAMEO, GCC-China RX II, Jaguar V, Puma IV, Expert II, AR-24, i-Craft sns.
1. Famaritana ankapobeny
Cuttable Heat Transfer Flock dia ondry viscose famindrana hafanana avo lenta mifototra amin'ny sarimihetsika polyvinyl klôro, miaraka amin'ny famirapiratana sy ny fibre noho ny hakitroky ny fibre avo, novokarina araka ny fenitra EN17, ny Cut table Flock dia mifototra amin'ny sarimihetsika polyvinyl chloride miaraka amin'ny adhesive mafana miempo amin'ny sarimihetsika polyester. tsipika, tsara fanapahana sy weeding fananana.Na ny logos amin'ny antsipiriany sy ny litera faran'izay kely aza dia tapaka latabatra.Ny adhesive mafana miempo vaovao dia mety hamindra amin'ny lamba toy ny landihazo, mifangaro amin'ny polyester / landihazo sy polyester / acrylic, Nylon / Spandex sns. Ny Flock Heat Transfer Flock dia azo ampiasaina amin'ny fanontana T-shirt, akanjo fanatanjahan-tena & fialam-boly, fanamiana, bisikileta. akanjo sy lahatsoratra fampiroboroboana.
Cuttable Heat Transfer Flock dia azo ampiasaina amin'ny fanoratana amin'ny T-shirt, akanjo fanatanjahan-tena & fialam-boly, kitapo fanatanjahan-tena ary lahatsoratra fampiroboroboana.ary azo tapahina miaraka amin'ireo teti-dratsy rehetra.Manoro hevitra izahay hampiasa antsy 30°.Aorian'ny famafazana dia afindra amin'ny alàlan'ny fametahana hafanana ny sarimihetsika flex tapaka.Tapaho ny latabatra Flock miaraka amin'ny sarimihetsika polyester adhesive, ahafahana mamerina toerana.
■ Amboary ny lamba miaraka amin'ny sary maro loko tianao indrindra.
■ Natao ho an'ny vokatra mazava amin'ny lamba landihazo maizina na mazava loko na landihazo/polyester
■ Tsara sasana ary mitazona loko
■ Mora kokoa sy elastika kokoa
4. Tolo-kevitra Cutter
Ny Flock Heat Transfer Cuttable dia azo tapahina amin'ny teti-dratsy rehetra toy ny: Roland CAMM-1 GR/GS-24, Desktop STIKA SV-15/12/8, andiany Mimaki 75FX/130FX, CG-60SR/100SR/130SR, Graphtec CE6000 sy.
5. Fametrahana teti-dratsy
Tokony hanitsy foana ny fanerena antsy ianao, manapaka haingana araka ny taonan'ny lelany sy ny Complicated na ny haben'ny lahatsoratra.
Fanamarihana: Ireo angona ara-teknika sy tolo-kevitra etsy ambony dia mifototra amin'ny fitsapana, fa ny tontolo iainan'ny mpanjifantsika,
tsy fanaraha-maso, tsy miantoka ny fampiharana azy ireo izahay, Alohan'ny fampiasana, azafady amin'ny fitsapana feno voalohany.
■ Afanaina mialoha ny vy amin'ny < volon'ondry>, ny mari-pana 165°C no soso-kevitra.
■ Aza mampiasa ny fiasan'ny etona.
■ Ataovy azo antoka fa mitovy ny hafanana amin'ny faritra iray manontolo.
■ Atsipazo ny taratasin'ny fifindrana, ary asio fanerena araka izay azo atao.
■ Rehefa manetsika ny vy dia tokony ho kely kokoa ny tsindry.
■ Aza adino ny zorony sy ny sisiny.
■ Hosory ny horonan-tsary aoriana manomboka eo amin'ny zorony aorian'ny fisintahana.
■ Fametrahana milina fametahana hafanana 165 ° C mandritra ny 15 ~ 25 segondra amin'ny fampiasana tsindry antonony.ny gazety dia tokony hikatona mafy.
■ Tsindrio vetivety ny lamba 165°C mandritra ny 5 segondra mba hahazoana antoka fa malama tanteraka.
■ milina fanerena 165°C mandritra ny 15~25 segondra.
■ Hosory ny sarimihetsika aoriana manomboka eo amin'ny zorony.
Sasao amin'ny RANO MATINY ny ao anatiny.AZA MAMPIASA BLEACH.Apetraho ao anaty fanamainana na ahantona mba ho maina avy hatrany.Aza miforitra ny sary nafindra na ny T-shirt fa mety hiteraka vaky izany, Raha toa ka misy vaky na fiketronana, azafady asio taratasy misy menaka misy menaka eo ambonin'ilay fametahana hafanana na vy mandritra ny segondra vitsy mba hahazoana antoka fa manindry mafy indray ny famindrana manontolo.
Azafady, tadidio fa tsy asiana vy mivantana amin'ny sarin'ny sary.
teo aloha: Sarimihetsika mangarahara Eco-Solvent InkJet
Manaraka: Sarimihetsika Eco-Solvent Ink Jet Backlit